Inweta Ihu Ọma Dị Oké Mkpa Phone Data Na Cell ekwentị Nledo App
On: Jul 23Author: haIge: A gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota oru, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, iPhone 5s Nledo Software, Ekwentị mkpanaaka nlekota oru, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa Internet-eji, Nne na Nna Control, Nledo Facebook ozi, Nledo N'ihi gam akporo, Nledo N'ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile ama, Nledo na Oku, Nledo na SMS, Nledo Skype, Nledo Viber, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Mgbe otu onye na-atụle banyere a ekwentị nledo ngwa, ihe mbụ obe uche bụ otú ọ na-aga na-arụ ọrụ na iche na ekwentị enweghị ime ka onye nwe mara. Otú ọ dị na nke ahụ bụ ịma mma nke a software. Ọ na-aga na-ahụ na ụmụ gị ma ọ bụ onye gị na dị completelyunaware nke eziokwu na e nwere spy software arụnyere na ekwentị. N'ihi ya, i nwere ike na-a mma lee anya na ndị niile dị mkpa messages, oku, internet akụkọ ihe mere eme na ihe nile na mkpa ka ị mara iji jide n'aka na ị hụrụ n'anya dị mma na n'ebe ọ bụla bi n'ụbọchị ikpeazụ n'èzí ize ndụ.
The ọnụego nke cybercrime amụbawo nke ukwuu nke na ọ fọrọ nke nta siri ike na-ahụ na gị na azụmahịa ọmụma bụ ịbụ keptsafe. Iji ghọta ihe ndị a echiche ma na-arụsi ọrụ ike anya na ihe ọ bụla ọzọ, ndị nledo ngwa ga-gị nduzi kasị mma. Wụnye ya dị na ekwentị na mgbe ahụ site n'ime obodo controlyou ike ịmalite na-elekọta ihe niile mbipụta na ị bụbu amaghị nke na chọrọ ịmata. Ị agaghịkwa ga-ajụ gị na ụmụ gị na-achọghị ajụjụ na ihere themwith wetara ajụjụ ọnụ.
Ihu ihu usoro
E nwere ọtụtụ ajụjụ ị nwere ike na-abịa gafee n'ihi na ọtụtụ na-eche na-ejizi dị otú ahụ software bụ a ize ndụ na mgbagwoju anya ahịa. Ma ọ dịghị ihe na-atụ egwu n'ihi na ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agbalị aka gị na ọrụ ndị a maka nke mbụ ha na, ọ ka ga-abụ nnọọ mfe maka gị ka ijikwaa. The usoro maka ọrụ ya dị mfe. Ọzọkwa, mgbe ị rụnyere ya na iche na ekwentị, i nwere ike na-emeghe na spy software interfacethrough ndị pụrụ iche na koodu na ihe ọ bụla ọzọ na ngwaọrụ na ịnweta niile ozi ị na mkpa. N'ihi ya, ọ bụ mara mma n'ụzọ kwụ ọtọ na n'ebe na-adịghị nsogbu aka.
Ikpochapụ obi abụọ na ekwentị nledo ngwa bụ kacha, mkpa ka ị malite iji ya na mgbe ahụ na-ahụ uru nke na ọ na-enye. I nwere ike inwe anactive achịkwa viewingmessages dị na ekwentị na evencalls. Right site na ndị na-e zitere ndị natara, niile nkọwa ga-doo anya gị. ọbụna ihe oyiyi, web ojiji, kalenda nkọwa na ozi ọnọdụ a ga-emere. Ya mere na i nwere a keukwu obibia kwupụta na-eme ịhụ na ụmụ unu dị mma na onye gị na na-agaghị agha ụgha banyere ya / ya ebe.
Mgbe ị na-agbalị na-ajụ gị na ụmụ gị banyere ndị ha fechapụta, i nwere ike ghara inwe a ogologo azịza na mgbe ụfọdụ a pụtara na e nwere ụfọdụ ihe ọjọọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ influenceinvolved. Nke a nwere ike mgbe ịbụ ihe dị mma. Ya mere, ọ dị mkpa ịghọta na e nwere ihe dị irè ụzọ iji jikwaa ọnọdụ. na ekwentị nledo ngwa bụ ihe kasị pụrụ ịdabere na nhọrọ na i nwere ike ịdabere n'ebe. Mgbe a, unu agakwaghị na-eche na ọ dị mkpa ka ọ nọrọ ọtụtụ awa na-atụgharị uche na ebe gị na ụmụ gị bụ ndị na ndi ha bu. Site nsuso ala ha na ọnọdụ na kalenda data na ihe niile na-abịa na n'etiti, ị pụrụ inweta irè ozi na niile nkeji nkọwa dị ka nke ọma.
Ewere na ya na-arụ ọrụ enweghị ime ka onye nwe maara banyere ya adị na-eme ka ndị software niile ọzọ na-akpali akpali. Ọ bụ saa mbara ma na-enye ihe obibia nke enyi na enyi, mfe ma kpamkpam nchebe iji.
Ị nwere ike Download: Inweta Ihu Ọma Dị Oké Mkpa Phone Data Na Cell ekwentị Nledo App
Cell ekwentị nledo ngwa, Ekwentị inyocha ngwa maka gam akporo, Cell ekwentị Nledo ngw N'ihi na iphone, Ekwentị inyocha ngwa n'ihi na iphone free, Cell ekwentị nledo ngwa free ikpe, Cell ekwentị nledo ngwa reviews, Cell phone spy free, Free ekwentị nledo ngwa, Free ekwentị nledo ngwa n'ihi na android